VaRoma 5:8—“Patakanga Tichiri Vatadzi, Kristu Akatifira”
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kabuverdianu Kinyarwanda Kongo Korean Malay Myanmar Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa VaRoma 5:8—“Patakanga Tichiri Vatadzi, Kristu Akatifira”
“Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira.”—VaRoma 5:8, Bhaibheri—Shanduro yeNyika Itsva.
“Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti: Tichiri vatadzi, Kristu akatifira.”—VaRoma 5:8, Bhaibheri Dzvene muchiShona Chanhasi.
Zvinorehwa naVaRoma 5:8
Jehovha * Mwari akaratidza rudo rwakakura chaizvo, paakabvumira kuti Mwanakomana wake Jesu Kristu afire vanhu vane chivi. (Johani 3:16) Sezvo vaine chivi, vanhu vanowanzofunga nekuita zvinhu zvisingaenderani nemitemo yaMwari yakarurama. (VaKorose 1:21, 22) Asi Mwari akaita kuti tikwanise kuyananiswa naye “achishandisa rufu rweMwanakomana wake.” (VaRoma 5:10) Izvi zvinoita kuti tive nemukana wekuva shamwari dzaMwari iye zvino uye tine tariro yekuzorarama nekusingaperi.—VaRoma 5:11; 1 Johani 4:9, 10.
Mashoko akapoteredza VaRoma 5:8
Muapostora Pauro akanyorera mashoko aya vaKristu vaigara muRoma. Muchitsauko 5 chetsamba yaPauro kuVaRoma, Pauro akatsanangura kuti nei vaKristu vachikwanisa kufara uye vachikwanisa kuva nechokwadi netariro yavo. (VaRoma 5:1, 2) Tariro iyoyo “haiiti kuti tiore mwoyo,” nekuti inobva parudo rukuru rwaMwari rwaakaratidza achishandisa Jesu. (VaRoma 5:5, 6) Jesu akaramba achinyatsoteerera Mwari, asi munhu wekutanga Adhamu haana kuita saizvozvo. (VaRoma 5:19) Kusateerera kwakaita Adhamu kwakaita kuti vana vake vave nechivi uye vafe. (VaRoma 5:12) Asi kunyatsoteerera kwakaita Jesu uye kufa kwaakaita sechibayiro kunoita kuti vanhu vanoteerera vave netariro yekurarama nekusingaperi.—VaRoma 5:21.
^ ndima 3 Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.—Pisarema 83:18.
Verenga VaRoma chitsauko 5 pamwe chete nemashoko emuzasi uye mamwe mavhesi anoenderana nearimo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe VaRoma 5:8—“Patakanga Tichiri Vatadzi, Kristu Akatifira”
Kutsanangurwa kwaVaRoma 5:8—“Patakanga Tichiri Vatadzi, Kristu Akatifira”
ijwbv nyaya 18
Johani 3:16 Inotsanangurwa—“Nekuti Mwari Akada Nyika Kwazvo”